Col. C/Laahi Yuusuf oo Xilkii Ka Qaaday Col. Nuur Cadde
Madaxweynaha DFKMG, Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaaraha DFKMG Nuur Cadde, waxaqna uu sheegay in uu xilka ka qaaday Axad Dec 14, 2008. Waxana uu C/laahi Yuusuf sheegay in uu maalmo gudahood kusoo magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub.
C/laahi Yuusuf oo shir jaraa'id ku qabtay Baydhabo ayaa xil-kaqaadista ku saleeyay in xukuumaddu ay gudan weydey xilkeedii.
Waxaa arrinta xil ka qaadista waxaa ku gacan sayray Nuur Cadde oo ku sugan Baydhabo, xil ka qaadistaasna ku tilmaamay "sharci darro." Isagoo intaas ku daray in uu ka xun yahay tallaabada uu qaaday madaxweynaha DFKMG. Nuur Cadde waxa uu si qayaxan u sheegay in madaxweynaha DFKMG uusan isaga (ra'iisul wasaaraaha) xilka ka qaadi karin.
Gen. Cadde Muuse oo ku Gacan Sayray Qoraal ka soo baxay "Golaha Issimada Puntland".
Madaxweynaha DGPL, Gen. Cadde Muuse oo Sabtidii (Dec 13, 2008) ku soo laabtay Garoowe ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku gacan sayray qoraal ka soo baxay "Golaha Issimada Puntland".
Qoraalka uu ku gacan sayray Gen. Cadde Muuse oo aay soo saareen issimada waxa uu u qornaa sidan:
Golaha Issimada Puntland -- 13.12.2008
Ku: Madaxwaynaha maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland
Ku: Murashaxiinta u tartamaya madaxtinada Puntland
Ku: Saxaafada madaxa banaan dibad iyo gudaba
Og: Dadwaynaha Reer Puntland
Ujeedo: Gudoon Issimo
Kadib markii ayna soo gaadhay dacwad musharaxiinta ay ku muujinayeen inuu jiro khilaaf ku saabsan inaan lagu wada qanacsanayn habka doorashada loo wajahayo, xulida gudiga khilaafaadka iyo ansaxinta xubnaha gollaha wakiilada Puntland, sugida amaanka iyo tasarufka dhaqaalaha dalka. Kadib markay Issimadu la kulmeen masuuliyiin kamida maamulka sida madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa, Wasiirka Maaliyada iyo sarkaalka loo xilsaaray sugida nabadgalyada. Waxay Issimada guda galeen sidii xal loogu heli lahaa arrimahaa kor kuxusan.
Falanqayn iyo dood maalmo qadatay kadib markay muuqatay khilaaf jira darteed in loo baahan yahay in lahelo xal lagu wada qanci karo Issimadu waxay gudoomiyeen:
1: Doorashadu inay ku qabsoonto waqtigii loo mudeeyay.
A: In taliyaha ciidanka sugida amniga xiliga doorashada uu si buuxda amniga u sugo caasimada iyo goobaha doorashada.
B: Inta ka horaysa 31 Dec. uu ka amarqaato Maamulka.
C: In taliyuhu Laga bilaabo 1 January ilaa 10 January uu ka amarqaadan doono Issimada.
D: In tirada ciidanku aanay ka yaraan 300 oo askari, kana koobnaadaan gobolada Puntland.
E: In Ciidanku leeyahay astaan ka gaara ciidamada kale.
F: In dadweynuhu ay gacan ka siiyaan ciidankaas gudashada wajibaad kooda.
G: Laga bilaabo 1 January inay reeban tahay kusidashada hubka magaalada dhexdeeda marka laga reebo ciidankaas.
H: In Murashaxiinta dowlad iyo shacabkuba aanay tikinko iyo ciidan ka badan 5 askari la imaan karin goobta doorashada.
A: In dowladu aanay u isticmaalin hantida dowlada noockasta oo ay tahay ololaha doorashada u garka ah iyaga.
B: In Isla dhaqaalaha dowlada lagu bixiyo qorshaha misaaniyada sida mushaharka, IWM, mudnaanta koowaadna la siiyo haqabtirka ciidamada sida gaarka ah loogu xilsaaray sugida amniga iyadoo si buuxda loo tixgalinayo baahida dhaqaale ee uu taliyuhu la yimaado.
4: Gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansaxinta gollaha Wakiilada.
A: Waxaa jiraya 7 xubnood oo gudi marjac Issimood ah.
B: Gudiga xalinta khilaafadka iyo ansaxintu wuxuu ka koobnaan doonaa 7 xubnood.
C: Gudoomiyaha gudigu wuxuu ahaan doonaa kiisii hore.
D: Sadexda xubnood ee Sool, Sanaag iyo Karkaar waxaa soo xulan doona murashaxiinta maamulka.
E: Sadexda xubnood ee Nugaal, Cayn iyo Mudug waxaa soo xulan doona musharaxiinta Shacabka.
F: Go'aan qaadashada gudiga laguma meelmarin karo cod qaadis
G: Wixii guddigu isku khilaafo waxaa loo soo gudbinayaa guddiga Issimada ee ku xusan qodobka 4aad faraqiisa A si aay uga gaadhaan go'aan kama dambaysa.
H: Waa in xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka iyo Ansaxintu fadhiyaan 15 Dec.
I: Qabashada waraaqaha kalsoonida xubnaha barlamanka galaya waa in aysan ka dambayn 20ka Bishan (Dec 2008).
Issimadu waxay dadka reer Puntland ee arrimaha doorashada ku howlan si naxariis leh uga codsanayaan inay si hufan uga qayb qaataan doorashadaas aadna looga fijignaado wixii wax u dhimi kara xasiloonida iyo habsami u socodka doorashada iyo wixii la hal mala, isla mar ahaantaa xubnaha tartamaya waxay ku boorinayaan in ay si dagan oo masuuliyadi ku dheehan tahay u gutaan xilka qaybta ay ku leeyihiin cidii guuleysatana loo hambalyeeyo lalana shaqeeyo. Murashaxiinta ku guuleysata doorashadan waxaa laga rabaa inay suuragaliyaan qabashada doorasho guud si looga gudbo qaabkaan soo noqnoqday.
Issimada Saxiixey go'aankaan
Islaan Ciise Islaan Maxamad
Suldaan Siciid Max'ed Garaase
Suldaan C/laahi H. Nuur
Suldaan Max'ed Axmed Cabdulle
Sool iyo Cayn:
Garad Jama Garad Cali
Garad Saleban Farad Max'ed
Garad A/lahu Garad Soof
Suldaan Sicid Cisman Ali
Ugaas A/lahi Ciise Nuur
Garad A/salam Xasan
Boqor A/Laahi Axmed Ali
Garad Saleban Burale
Garad Max'ud Cusmaan Mashqare
Ugaas Faarax Max'ud Gurey
Garad Max'd Saleeban Colaad
Garad Ibrahim Barud
Bari iyo Karkaar
Suldan Siciid Max'd Irbad
Islam Max'ud Islan Yasin
Suldan Ciise Axmed Omar
Ugas Jamal Abdi Ducale
Suldan Siciid Guled Sanyare
Suldan Max''ed Yusuf Cabdi